Cakaara, “Taageerayaal ka soo goostay ONLF” – Rasaasa News
Haweenay reer Wardheer ah, kana mid ahayd, kuwii ugu taageerada badnaa ONLF-ta Maxamed Cumar Cismaan iyo labo gabdhood ooy dhashay, ayaa ka cadceedsatay cudhkana u galay safaarada Atoobiya iyo waftigii Madaxwaynaha.
Hibo Cali Malow oo hor u taageeri jirtay Maxamed Cumar Cismaan ayaa haatan sheegtay in ay taageerayso Madaxwayne degaanka Cabdi Maxamud Cumar. Hibo Malow ayaa la sheegay in ay Safaarada Atoobiya la tagtay maalintii shalay kulan ay beesheedu la lahayd Madaxwaynaha. Iyada oo codsatay in Internetka la galiyo, arintaas oo aad moodo in ay ula jeedo Maxamed Cumar Cismaan.
Beesha Makaahiil oo ka mid ahayd taageerayaasha ugu badan ee Maxamed Cumar Cismaan, ayaa baryahan dambe waxay ka cadhaysnayd in laga reebay xubnaha golaha dhexe bishii June 2013. Arintaas oo ay ku eedeeyeen xubnaha reer Cabdile ee ONLF-ta ku jira oo ka horjooga in ay galaan golaha dhexe.
Hibo Malow waxay ka mid ahayd dadkii London ka tagay kolkii madaxwaynaha laga dhigay Cabdirashiid Duulane, xiligaas oo ay Jijiga ka dhisatay guri. Waxayna ahayd qolyihii u ololayn jiray in lala heshiiyo Atoobiya ee ku xidhnaan jiray safaarada London. Waxayna ka mid ahayd qolyihii horboodayey odayaashii 2005-tii London loo diray si ay nabda uga keenaan ururka ONLF.
Hibo Malow mar labaad ayey bilowday taageerada ururka ONLF, sandkii 2006, iyada oo dadka ku odhan jirtay “waxa kale oo dhan waa been runtu waa ONLF.”
Hibo Cali Malow, waa haweenay da,a ah sanooyinkii u dambeeyeyna ma awoodin in ay wax hawl ah u qabato ururka ONLF, af iyo adin midna. Dadka ay saaxiibada yihiin, ayaa waxay ku micneeyeen tagida safaarada iyo taageerada cusub ee ay siisay mudane Madaxwayne Cabdi in ay tahay uun QORAX doon.
Waxaa yaab leh farxada iyo dabaal degyada ay muujinayaan masuuliyiinta iyo boggaga Internet-ka ee degaanka Somalida Atoobiya iyo waxa ay u goyn karto Duq Hibo Cali Malow. Arinkaas wuxuu muujinayaa heerka nugaylka ee degaanka Somalidu gaadhsiisan yahay in uu helo ONLF.